Iindlela ezintlanu zokuNika iNkcubeko kwisiCwangciso sakho seNtengiso | Martech Zone
Uninzi lweenkampani zijonga inkcubeko yazo kwinqanaba elikhulu, zigubungela umbutho uphela. Nangona kunjalo, kubalulekile ukufaka inkcubeko echaziweyo yombutho wakho kuyo yonke imisebenzi yangaphakathi, kubandakanya neqela lakho lentengiso. Ayisihambisi kuphela izicwangciso zakho kunye neenjongo zenkampani yakho, kodwa ibeka umgangatho kwamanye amasebe ukuba alandele.
Nazi iindlela ezimbalwa isicwangciso sakho sentengiso esingabonisa inkcubeko yombutho wakho ngokubanzi:
1. Chonga inkokeli yenkcubeko.
AphaIFomstack , siqeshe umntu ojolise kuphela ekuqinisekiseni ukuba imigaqo-nkqubo yethu iyaphakanyiswa. Ewe ndiyazi, akusoloko kunokwenzeka ukwenza oku. Nangona kunjalo, ukuba unomntu kwinkampani yakho obonisa umdla wokuthatha olu xanduva, khuthaza kwaye uqhubeke ubaxhasa! Kubaluleke kakhulu ukuba ube nomntu onokukunceda ukukhulisa inkcubeko yenkampani yakho. Ezi zinto zinokuchazwa njengeqela, kodwa kufanele ukuba kubekho umntu omnye onoxanduva lokuqinisekisa ukuba iqela liphumeza ezi zithethe zenkcubeko mihla le. Inkcubeko ngaphakathi kwinkampani inokukhokelela kwimpumelelo enkulu kwinkampani.
2. Yenza amanani esiseko achaziweyo.
Ukusuka kwinkqubela phambili yenkampani yethu ukuya ekusebenziseni imveliso yethu, sisebenza phantsi komgaqo "UKHUSELEKILEYO": Kulula, kuyabila, Kumnandi, kulungile. Ukuphuhlisa amaxabiso obuqu eshishini lakho kuvumela yonke imiba yenkampani yakho ukuba icwangciswe ngokwale mithetho. Ukuba abasebenzi abaqinisekanga ngesikhokelo sabo okanye banamathele kwiprojekthi, bhekisele kwiinqobo zakho ezisemgangathweni zesikhokelo. Oku akufuneki ukuba babe nobuciko obukhethekileyo-njenge-SAFE, amaxabiso asisiseko ambalwa anokusebenza kwiimeko ezahlukeneyo.
3. Phinda kwakhona. Phinda. Phinda.
Ukusukela ekuqaleni kokuphuhliswa kwayo yonke indlela ukuya ezantsi ukwazisa, amaxabiso akho asisiseko kufuneka abambe ubukho obuqinileyo. Eyona ndlela yokuqinisekisa ukuba ubuntu benkampani yakho ayiguquki kukuphinda ubatyelele yonke imihla. Xa usungula iphulo lentengiso elitsha okanye usenza imveliso entsha, qiniseka ukubuza iqela lakho, “Ingaba le mveliso, iprojekthi, inkqubo, njl., Iyigcina njani indlela yethu 'YOKHUSELEKILEYO'?
4. Ungalibali ngenkonzo yabathengi.
Abathengi bakho bachaza inkampani yakho. Bazise ukuba bayathandwa. Luluvo olulungileyo ukulandela “umThetho wegolide” - phatha abanye ngendlela onqwenela ukuphathwa ngayo. Awunakuhlala uneempendulo kwimibuzo yabathengi okanye ube nesisombululo kwiingxaki zabathengi; thembeka kwaye ubaqinisekise ukuba uyakufumana umntu onokubanceda.
5. Beka ubuso kwi-brand.
Iinkampani ezininzi zinobukho boluntu. Kodwa amaxesha ngamaxesha, ukungaziwa kunokwenza kubonakale ngathi ii-tweets zakho zizenzekelayo kwaye iimpendulo zakho zenziwe enkonkxiweyo. Kulungile ukongeza ubuntu kuhlobo lwentlalo. Abathengi banokuziva bekhululeke ngakumbi ngokwazi ukuba bathetha nomntu wokwenyani; umntu abanokunxibelelana naye banxibelelane naye. Oku kunokukhokelela ekunyanisekeni kwabathengi kwinkampani yakho. Sonke singabantu, masenze njengayo!
Ezi ngcebiso azibalulekanga kwiqela lakho lentengiso. Zingasetyenziswa ngamanye amasebe, kunye nenkampani yakho iyonke. Ngokuphuhlisa nokudibanisa inkcubeko kwinkampani yakho, udala imeko ekhuthaza ukusebenzisana kunye nokuvumela abathengi bakho ukuba banxibelelanise ubuntu kunye negama lakho.
tags: Iimilinganiselo ezingundoqoINkokeli yeNkcubekoInkonzo eyenzelweqhinga urhwebo
Ukusebenzisana kwamashishini kusetyenziswa iindawo zokusebenzela zeTWiki